दूध, अण्डा र मासुमा तनहुँ जिल्ला आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ ।
पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेसँगै आवश्यक दूध र मासुजन्य पदार्थको उत्पादन हुँदा जिल्ला आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख बन्दै गएको हो। जिल्लामा खपत भएको भन्दा बढी उत्पादित दूध र मासुजन्य पदार्थ जिल्ला बाहिर पनि निर्यात हुने गरेको छ।
राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तनहुँ दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र तनहुँले जनाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय मादपण्डअनुसार दूधमा आत्मनिर्भर हुन प्रतिव्यक्ति वर्षिक ९१ लिटर उत्पादन हुनुपर्छ। तर तनहुँमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १५२ लिटर दूध उपलब्ध भइरहेको छ।
त्यस्तै मासुमा आत्मनिर्भर हुन राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक १२।१४ केजी उत्पादन हुनुपर्छ। तर तनहुँमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १४ दशमलव ०९ केजी मासु उपलब्ध भइरहेको छ। यसैगरी अण्डामा आत्मनिर्भर हुन राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ४८ अण्डा पुग्नेगरी उत्पादन हुनुपर्छ। तर तनहुँमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ४७ दशमलव १९ गोटा अण्डा उपलब्ध भइरहेको छ। जिल्लामा हाल दैनिक दुई लाख ५० हजार अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार तनहुँको कूल जनसङ्ख्या तीन लाख २३ हजार २८८ रहेको छ। व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्षम भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मासु उत्पादनले बाह्य जिल्लामा निर्यात गर्न नसकिए पनि आफ्नो जिल्ला आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको छ।
जिल्लामा वार्षिक २९ हजार ४१९ मेट्रिक टन दूधको माग रहेकामा ४९ हजार ५४३ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका अनुसार तनहुँमा वार्षिक २० हजार २४ मेट्रिक टन दूध बढी उत्पादन भइरहेको छ। बढी भएको दूध तनहुँ जिल्लाभन्दा बाहिर निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
प्रमुख डा. श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्लामा दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्लामा ४८ हजार ३३५ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । तनहुँमा उत्पादित दूधमा भैंसीको योगदान बढिरहेको उनले बताए।
जिल्लामा एक लाख ४० हजार २०६ भैंसी, ९६ हजार ४४१ गाईपालन गरिएको छ। गाईभन्दा भैंसीपालन बढी भएकाले दूध उत्पादनमा भैंसीको योगदान धेरै रहेको छ।
वार्षिक चार हजार ५२६ मेट्रिक टन मासुको माग रहेको तनहुँमा चार हजार ५५८ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भइरहेको छ। जिल्लालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको प्रमुख डा श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा राँगो र भैंसीबाट दुई हजार ९४९, खसी र बोकाबाट ९९६, भेडाबाट ४ दशमलव ५८, सुङ्गुुर र बङ्गुरबाट ३३७ दशमलव ४०, कुखुराबाट २६८ दशमलव ५६ र हाँसबाट एक दशमलव ०८ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भइरहेको छ।
युवालाई पशुपालनमा आकर्षित गराउन जिल्लामा अनुदान वितरण गर्ने, तालीम प्रदान गर्ने, प्राविधिक सहयोग गर्नेलगायतका कामहरु भएको प्रमुख डा श्रेष्ठले बताए। –सानेबहादुर नेपाली
[तस्वीर] टाउकोमा नेपालको झण्डा भिरेर रोजगारीको लागि मुग्लान !
बलिउडमा फिल्मकर्मी मात्र होइन, क्रिकेट खेलाडीका श्रीमतीहरू पनि तानिए ड्रग्स मुद्दामा
संसदीय समितिमा स्वास्थ्य सचिवले भने– 'कोरोना खोप परीक्षण नेपालमा गर्ने कि नगर्ने छलफलमै छौं'
क्यानाडामा कोरोनाको ‘सेकेन्ड वेभ’ - प्रधानमन्त्री ट्रयुडेउ
अफगानिस्तानमा सरकारी सुरक्षाकर्मीको हमलामा १३ आतंकवादी ठहरै